ဆက်ဆံမှုတို့၏စတင်ရာဖြစ်သော ကိုရီးယား !
ဟန်းကော့ နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်၊ စကားပြန် နှင့် ဘာသာပြန် ဘွဲ့လွန်ကျောင်းတွင် အတန်းဖော် သုံးဉီးဆုံတွေ့ခဲ့ကြသည်။ ဘာသာစကား ဝါသနာတွင် စိတ်အားထက်သန်လွန်းကြသဖြင့် ကမ္ဘာ့အဝှမ်း ဘာသာစကား ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် ပါရာ အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီ လိမိတက် ကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ကိုရီးယား ချွန်ဟ ဘာသာပြန်လုပ်ငန်း (ကေစီတီ)ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ ကိုရီးယား ဆော့ဖ် ဘာသာပြန်လုပ်ငန်း (ကေအက်စ်တီ)ကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ ကိုရီးယား ဘာသာပြန် ကုမ္ပဏီ (ကေတီစီ)ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်မှာ ၂၅ နှစ် ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ .
နိုင်ငံတွင်း နှင့် ပြည်ပမှ ဘာသာပြန်/စကားပြန် ကျွမ်းကျင်သူပေါင်း ၁၀ ၀၀၀ ကျော်ဖြင့် နယ်ပယ်မျိုးစုံအတွက် အလုပ်ပေါင်း ၅၀ ၀၀၀ ကျော်ကို အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့အနှံ နိုင်ငံပေါင်း ၆၀ ကျော်မှ ဘာသာစကား ၃၀၀ ကျော်အထိ ဘာသာစကားအများအပြားအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးလျက်ရှိနေပါသည်။ ကိုရီးယား ဘာသာပြန် ကုမ္ပဏီ (ကေစီတီ) သည် သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါသည်။	..
စမတ်ကျသော ဘာသာစကား ဝန်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်ပြီး ကိုရီးယား၏ ပုံရိပ်တန်ဖိုးကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ရန် နှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ထိပ်ဆုံး စကားပြန် နှင့် ဘာသာပြန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်လာစေရန် "ကိုရီးယား ဘာသာပြန်လုပ်ငန်း"ကို သီးခြားခွဲထုတ်နေပါသည်။	.
ယနေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ နာမည်ဂုဏ်သတင်းကို ပိုမိုတိုးတက်စေမည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ထိပ်ဆုံးရောက်သည်အထိ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေအုန်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုရီးယားဘာသာပြန်လုပ်ငန်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသူများ၏ နောက်မှနေပြီး ဆက်လက် ပံ့ပိုးမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးနေမည် ဖြစ်ပါသည်။	.
ကျွန်း အေ၊ လီ၊ ကိုရီးယား ဘာသာပြန်လုပ်ငန်း ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ဘာသာပြန် ဝန်ဆောင်မှု သမိုင်း၏ စာမျက်နှာသစ်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။	!
၁၉၉၃ ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၆ ရက် ပါရာ အင်တာနေရှင်နယ် ကို စတင်ခဲ့သည်
၁၉၉၆ ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက် ချွန်ဟ ဘာသာစကား ကို စတင်ခဲ့သည်
၂၀၀၀ ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက် ကုမ္ပဏီနာမည်ကို ချွန်ဟ ဘာသာစကား မှ ကိုရီးယား ချွန်ဟ ဘာသာပြန် ကုမ္ပဏီ ဟု ပြောင်းလဲခဲ့သည်
၂၀၀၁ ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၁ ရက် ကိုရီးယား ဆော့ဖ် ဘာသာပြန် ကုမ္ပဏီ ကို စတင်ခဲ့သည်
၂၀၁၀ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက် ကိုရီးယား ဘာသာပြန် ကုမ္ပဏီကို စတင်ခဲ့သည်
ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ စိတ်ဓာတ်	.
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနေသူများ နှင့်အတူ ထိပ်ဆုံးသို့ ချီတက်ကြမည်
အဆုံးသတ်မဲ့ စိန်ခေါ်ရဲသည့် စိတ်ဓာတ်